Izindaba - Ukusebenza kahle ngemuva konyaka omusha
Sisiza umhlaba ukhule kusukela ngo-2012
SHIJIAZHUANG TUOOU IZAKHIWO ZOKWAKHA ZOKUHWEBA CO., LTD.
Shayela Ukusekelwa +8613931988183
Ukusekelwa kwe-imeyili tuoouchina@126.com
I-Light Steel Villa
Indlu yemisebenzi eminingi
Ibhokisi lokuthumela, i-newsstand, indlu yangasese
Ibhodi elenga ngaphakathi nangaphandle
Izingcezu ezenziwe ngezifiso
Laser (ahlabayo, eguqa, Welding)
Wokushaya (ukusika, ukugoba, Welding)
Ikhoyili (lashukumisa, umbala camera, ikhoyili)
Ukusebenza okuhle ngemuva konyaka omusha
NgoMashi 2, uMnu Robert, ikhasimende lase-Australia, wabuye weza enkampanini yethu. Lesi yisikhathi sakhe sesithathu eza eChina nase tuoou. Ngemuva kokuqonda kokuqala kokuqala, ukuhlolwa kwesibili okuphelele nokuphumelela kokugcina ngalesi sikhathi uMnu.Robert ubelokhu egcizelela ukuthi udinga izindlu zezinsimbi ezikhanyayo zobuchwepheshe obuphakeme, ezingabantu nezemvelo, futhi akayitholanga imikhiqizo ayifunayo ngempela Shijiazhuang. Kodwa-ke, ubelokhu encoma ikhwalithi nokubukeka kwemikhiqizo yethu, okungathiwa ihamba phambili kunezinye izinkampani embonini yendawo. Ikakhulu, izindlu eziguqula izinto nezokulingisa ezibekwe esangweni lefektri seziwumkhiqizo wokukhangisa odwebeni wokuheha amakhasimende.
Phakathi nalolu hambo, uMnu. Robert usayine ama-oda wezindlu ezintathu zezitayela zaseYurophu. Ngemuva kwezinyanga ezine zokuvakashelwa okulandelayo, umnyango waphesheya usanda kuvula ipulatifomu i-Alibaba. Ngenxa yokwenyuka nokwehla nokuncintisana okunamandla kwezimakethe, okuthintwe yizinto eziningi ezingaqinisekile, ngemizamo ehlangene yayo yonke iminyango yenkampani, isazuze imiphumela emihle yokuthengisa. Ebhekene nomsebenzi olandelayo, uMnu Robert wenze impumelelo enkulu kwezentengiso, Amathuba kanye nezinselelo zihlala ndawonye. Siyaqiniseka ukuthi sizothola imiphumela engcono.
Ukuphikisana phakathi kwezidingo zabantu zekhwalithi yempilo nendawo enendawo kukhulu kakhulu, futhi i-villa yensimbi elula, njengoba ibhalansi yalokhu okubili, isidingo sayo esibanzi siyanda unyaka nonyaka, okubaluleke kakhulu ekongeni isikhala futhi ukwenza ngcono indawo yokuhlala.
UTuoou ubelungiselela ukukhiqizwa kwemikhiqizo emisha, elwela ukuqamba nokuthuthukiswa okuhlukahlukene kwe-villa yensimbi elula. Izophinde iqinise ukwakhiwa kwepulatifomu, ijulise ukwakheka kwesiteshi, ihlinzeke ngesikimu sokuklama sobungcweti futhi ithuthukise uhlelo lwensizakalo ngemuva kokuthengisa. Ngikholwa ukuthi iphrojekthi yensimbi ekhanyayo izokwethula uhlelo olusha
Isikhathi sokuthumela: Mar-18-2021
Ikheli:Igumbi 1108 GELAN IBHIZINISI LOKWAKHA, NO. I-256 XISANZHUANG STREET, ISITHILI SEXINHUA, SHIJIAZHUANG, HEBEI, CHINA.
Izici zensimbi ekhanyayo ye-villa ne-sys ...
Ukuthuthukiswa umlando ukukhanya steel villa ...
Izinzuzo zokukhanya kwe-villa yensimbi